समृद्ध नगर क्षेत्रको परिकल्पना
कालोपत्रे हो वा ग्राभेल, छुट्याउन कठिन सडक । खाल्डाखुल्डी र जताततै फालिएका प्लास्टिक । सडकपेटिमा राखिएका गिट्टी बालुवा र ठाउँ–ठाउँमा उम्रिएका बोटबिरुवा । खच्चरका लिदी र साँढेका गोबर । टहरामा बढ्दै गएका साना होटल र खुद्रा व्यवसाय । नेपालगञ्जको पछिल्लो समय विकास भएको र न्यूरोड नाम दिइएको क्षेत्रको अहिलेको दृश्य यही हो । कुनै बेला सुर्खेत रोडलाई चुनौती दिन विकास भएझैँ लाग्ने यो क्षेत्रले शहरमा आइपुगेको कुनै आभाष दिँदैन । घेरबारका कारण जोगिएको सडकबीचको हरियाली चुवा र शिशौका हुर्किएका बिरुवाले आँखालाई केही राहत दिन्छ । अन्यथा यो कुनै गएगुज्रेको पुरानो शहरको केही फराकिलो गल्लीझैँ लाग्छ ।
नेपालगञ्ज आउने अधिकांश मानिस आइपुग्ने ठाउँ हो, यो न्यूरोड । यो क्षेत्रमा नै नेपालगञ्जका अधिकांश होटल छन् । सामान्यदेखि ठीकैका र मझौलादेखि ठूलासम्म । पुष्पलाल चोकबाट बसपार्क पस्ने सडक बिर्सेर पनि न्यूरोड मोडिएपछि नागरिकले आनन्द नै अनुभव गर्थे । नाक चुम्च्याउनु पर्थेन तर यो एकादेशको कथा भएछ । पुरानो बजार त्रिभुवनचोक जाने बागेश्वरीको बाटो जोडिउञ्जेलसम्म पनि उही दशा छ । नेपालगञ्ज आउने अरू गाउँ, शहरका नागरिकले यसको पहिचान के बनाउलान् ? फोहर र पत्रु शहर ?
हवाई मार्ग भएर राँझा विमानस्थलबाट मूल सडक निस्केर आउने यात्रु होस् वा कोहलपुर हुँदै नेपालगञ्ज मोडिने यात्रु, उसका लागि एउटा सुन्दर शहरको परिकल्पना गराउने छ लेनको सडकले स्वागत गर्छ तर जब शहर पसिन्छ, यहाँका मेयर डा. धवलशमशेर वा उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी सुकुमारी अध्यक्ष भवानी राणा बस्ने शहर यही हो भनेर गाह्रो पर्छ । उनीहरूको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई शहरको यो कुरूपले नराम्ररी भत्काइ दिन्छ । भलै यहाँ आइपुग्नेहरू सबै यी महारथीहरूलाई नचिन्ने किन नहोउन् ।
एमालेका नेता धवलशमशेर कुनै बेला यही नगरमा मेयर थिए । उनले नगरका लागि केही राम्रा प्रयत्न पनि नगरेका होइनन् । नेपालगञ्जको न्यूरोड उनी मेयर भएसँगै बनेको हो । उसबेला सफा र सुन्दर देखिने न्यूरोड बूढो, रागि र जीर्ण भएको छ । यसबीचमा धवलशमशेर नेपालगञ्जमा मात्र सीमित रहेनन् । यसबीचमा धवलशमशेर दरबारिया भए । राप्रपाका नेता भए । सांसदका लागि लायक भए र अहिले उनै धवलशमशेर राप्रपाका एक मात्र मेयर भएका छन् मध्यपश्चिममा तर उनी अब मेयर मात्र होइनन्, पार्टीका केन्द्रीय नेता हुन् । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको आदेश पालक हुन् । यी हरफ लेखिरहँदा उनी नेपालगञ्जमा छैनन् । खोजेर पनि भेट्न पाइँदैन । किनकि, पार्टी बैठकका लागि उनी काठमाडौँ गएका छन् । उनले राजनीतिक रूप फेरे पनि, व्यक्तित्व बदले पनि नागरिकले उनलाई पुरानै हैसियत दिएका छन् । मेयर बनाएका छन् ।
उनी निर्वाचित भएको केही साता मात्र भएको छ । त्यसैले उनले के कति काम गरे भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । उनका योजना कति सुन्न लायक थिए र कति कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढे भनेर विश्लेषण गर्ने यो बेला पनि होइन तर दिनको लक्षण बिहानले देखाउँछ भन्ने गरिन्छ र कामकाजका हिसाबले उनको बिहान सुरु हुनै पाएको छैन । यतिबेला उनको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गर्नु उनीमाथिको अन्याय मात्रै ठहर्दैन, ठाडै उनको विरोधी भएको ठहर्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दी पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन भएर हुनुपर्छ, प्रायः हरेक उम्मेदवारले स्मार्ट सिटी र मेगा सिटीको कल्पना बेचेको छ र विजेतामध्ये पनि उही हो । उदाहरणका लागि राजधानी शहरका मेयर एक हुन् । शहरका नागरिकले पानी खान नपाएको बारे उनीहरू बेखबर छैनन् । सडकको दूर्दशाबारे ढलमा बालिका बगेर मरेपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने देश पनि हो । राजधानीका सडकमा रोपाइँ भएको पनि उनले सुने देखेकै छन् । मेटो रेल र मोनो रेलका सपना बेच्ने पनि उनी नै हुन् । यिनै मेयरले पहिलो बैठकमा नगरका विजेता जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेट उपलब्ध गराउने निर्णय गराए । राजधानीका जनप्रतिनिधि कोही यस्ता पनि होलान्, जोसँग मोबाइल सेट
नहोस् ? उनले सामान्य सेटका लागि प्रति व्यक्ति तीस हजारका सेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरे । यो सामान्यको अर्थ आइफोन नभएर सामसुङ भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन ।
यो व्यापक आलोचना खेपेका मेयरले अर्को निर्णग गराए, कर बढाउने । त्यो कर व्यापारी व्यवसायीका लागि थिएन, सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालको रह्यो । गाडी पार्किङको शुल्क बढाए । राजधानीमा दादाहरूको स्वेच्छाचारी गाडी पार्किङ शुल्क उठाउने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठेपछि कहीँ पनि यो शुल्क नलिने व्यवस्था भएको थियो । घर कर र घर बहाल कर बढाइएको छ । राजधानीको महानगरका लागि स्रोतको अभाव हुने कुनै कारण नै छैन तर उनले आफ्नै स्रोत नभई कुनै सुविधा लिन नपाइने स्थानीय मन्त्रालयको निर्देशन पछि कर बढाउने निर्णय लिए । आफ्नो आम्दानीको स्रोत खोज्न उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौँका मेयरले पनि काम गर्न थालेको धेरै भएको छैन र आजै उनको आलोचना गर्नु उचित थिएन तर नागरिकले आफ्ना हितका लागि चुनेका प्रतिनिधिको सोच र मानसिकताले तिनै नागरिकलाई मारमा पारेको छ । उनले सुरुबाटै नागरिक विश्वास उठ्ने गरी कामको थालनी गरेका छन् । उनको बिहानीले मनोरेलको सपनालाई मनोरोगका रूपमा गाँज्ने खतरा बढाएको छ । काठमाडौँका मेयर धवलशमशेरको पुरानो पार्टीका उम्मेदवार हुन्, जसको भरपुर अनुभव गरेर धवलशमशेर आफ्नो पुरानो सोच र संस्कार अनुरूपकै पार्टीमा फर्केका छन् । उनले गर्नुपर्ने हजारौँ काममध्येको एउटा सानो नमुना मात्र हो, न्यूरोड क्षेत्र । के गर्नुपर्छ र के गरिहाल्नुपर्ने छ भन्ने योजना र कार्यक्रम बन्दै होलान् । यतिबेला हुलाकी सडकमा परेर निर्माण सुरु भएको बसपार्क जाने सडकको चौडाइका विषयमा नागरिक चासो बढेको छ । मापदण्डअनुसार नबनेको उनीहरूको आशङ्काले काममा अवरोध आउने खतरा उत्तिकै छ ।
अबको नागरिक २०५४ सालको छैन, न त २०६४ को जस्तो मात्रै छ । स्थानीय निकायको दोस्रो चुनाव हुँदा दलगत राजनीतिको आधा दशक मात्रै पूरा भएको थियो । २०६४ सालमा पनि नागरिक जनयुद्धको धङधङ्गीमा थिए । एउटा त्राशको वातावरण र आशाका त्यान्द्रा बाँकी थिए । अब डराउनुपर्ने शासक यो देशमा छैनन् । उनीहरूको अन्त्य भइसकेको छ । शासक छान्ने अधिकार नागरिकको हातमा आएको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले गरेका हरेक गलत कामको तत्काल प्रतिरोध गर्ने तहमा नागरिक पुगेको छ । सूचना प्रविधिले गर्दा हरेक नागरिक सशक्तीकरण उन्मुख छ ।
नेपालगञ्ज पश्चिमको ठूलो औद्योगिक नगर हो । विदेशीहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालनको केन्द्र बनाएको यो नगरको मुहार फेर्न कुनै पहाड उठाउनुपर्ने अवस्था छैन । स्रोत र साधनको अभाव हुने अवस्था पनि छैन । केवल चाहिएको छ, जनप्रतिनिधिको इमानदारी । धवलशमशेरका लागि यो परीक्षा २०५४ भन्दा २०७४ फरक ढङ्गमा उभिएको छ । दुई दशकको अन्तरका नागरिक आकाङ्क्षा मात्र चुलिएको छैन, उनीहरूको चेतनाको स्तर पनि निकै माथि उठेको छ ।